Fangatahana ampanaovin’ny Papa ho an’ny volana Janoary Taona 2019 » Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
« Hafatry ny birao maharitry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara
Jery Todiky ny taona 2018 »
« Mba hahay haka tahaka an’i Masina Maria amin’ny famaliana ny antson’ny Tompo anie ny tanora, indrindra ny any Amerika Atsimo, ka vonona hizara ny hafalian’ny Evanjely amin’izao tontolo izao ».
Tsy mahagaga raha afantoky ny Papa Ray Masina amin’ny tanora ny fangatahana ao amin’ny Tambajotram-pivavahana mandritra ity volana janoary ity. Amin’ity volana Janoary ity rahateo mantsy no hanatanterahana ny fihaonam-ben’ny tanora maneran-tany, na ny JMJ faha 34, izay hatao any PANAMA any Amerika Atsimo ; ny marimarina kokoa dia ny 22 hatramin’ny 27 janoary 2019. Ny lohahevitra nomen’ny Papa Ray Masina hiainan’ny tanora mandritra izany dia ny valin-tenin’i Masina Maria tamin’ny Anjely Gabriely hoe : « Inty aho ankizivavin’ny Tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao » (Lk 1, 38). Ary vao tsy ela ihany koa no nanatanterahana ilay sinaody lehibe momba ny tanora natao tany Roma, ny volana Oktobra 2018 farany teo. Ny lohahevitra tamin’izany moa dia hoe : « Ny tanora, ny finoana ary ny fandanjalanjana ny antson’Andriamanitra ».
Na ny JMJ Panama, na ny Sinaody momba ny tanora tany Roma dia samy mampifantoka ny tanora amin’ny fiantsoan’Andriamanitra azy. Ny sinaody momba ny tanora moa dia niresahana sy nandinihana indrindra ny fiainan’ny tanora manoloana ny antson’Andriamanitra miantefa aminy eo amin’ny fiainana andavanandro sy ao anatin’ny tontolo misy ankehitriny. Nasongandin’ny sinaody fa ilaina ny fanampiana ny tanora amin’ny safidim-piainany sy famaliany ny antson’Andriamanitra. Eo anatrehan’izany ihany koa anefa dia ilaina ny hananan’ny tanora toe-tsaina sy toe-panahy mahay mandanjalanja sy mihaino ny bitsiky ny Fanahy Masina eo amin’ny fiainany, hamantarany mazava ny antson’Andriamanitra miantefa aminy . Ka toa an’i Masina Maria ihany koa ny tanora : entanin’ny finoana sy ny fitiavana ao anatiny ka tsy hatahotra ny hamaly sy hanaiky ny antson’Andriamanitra.
Raha ny JMJ Panama kosa indray dia miteny ho azy ny valin-tenin’i Masina Maria tamin’ny Anjely, nanaiky ny antso sy ny hafatr’Andriamanitra niantefa taminy : « Inty aho ankizivavin’ny Tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao ». Tsapa ary tsinjon’i Masina Maria tamin’ny fandinihana lalina tao am-pony, ny halehibe sy ny hasarobidin’ny hafatr’Andriamanitra niantefa taminy : mila famonjena ny olombelona sy izao tontolo izao. Fanekena, fahafoizan-tena, fanoloran-tena tao anatin’ny finoana sy fanantenana ary fitiavana no nasetrin’i Masina Maria ny antson’Andriamanitra niantefa taminy.
Modely sy fakan-tahaka ho an’ny tanora tokoa i Masina Maria amin’ny fanekena sy fanoavana ny sitrapon’Andriamanitra. Tsy ho an’ny tanora any Amerika Atsimo ihany, na dia nosinganin’ny Papa manokana amin’izao vavaka izao aza izy ireo, fa ho an’ny tanora tsy ankanavaka mihitsy. Koa manentana ny vita Batemy rehetra ny Papa mba hivavaka ho an’ny tanora, tsy hanadino azy ireo amin’ny fanolorana ny andro atao isan’andro mandritra ity volana ity. Ny tanora mantsy no tanin-ketsan’ny fiantsoan’Andriamanitra sy fanantenan’ny Eglizy.